Showing २१-३० of ४५१ items.
नेवारी दुलर्भ नाच चर्या प्रदर्शन
धरान/नेवा सांस्कृतिक उत्थान मञ्चले नेवारको मौलिक दुर्लभ नाच चर्या नृत्य प्रदर्शन गर्ने भएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले कात्तिक १२ गते भानुचोकमा नृत्य प्रदर्शन गर्ने भएको हो । दुर्लभ चर्या नृत्यसँगै महामञ्जुश्री, कौमारी, काली, भैरव र बज्रयोगिनी साथै आधुनिक नृत्यसमेत प्रदर्शन गरिने कार्यक्रमका मूल संयोजक विश्वबन्धु ताम्राकारले जनाए । चर्या नृत्य बुद्ध धर्मको तान्त्रिक विद्याको एक सशक्त कला प्रस्तुति हो । कलाकारले ध्यानश्चर्या अर्थात् ध्यानभावमा ढालिएर नृत्यद्वारा प्रस्तुति दिने गर्दछन् । यस नृत्यमा पञ्चबुद्ध मानिएका अक्ष्योम्य, रत्नसम्भव, अभिताभ, अमोधसिद्धि र वैचोरनका ध्यानम
प्रकाशित मितिः कार्तिक १०, २०७५
१,१७४ पटक पढिएको
गरिबकाे दशै जाेहाे !(फाेटाे फिचर)
धरान / दशै धनीका लागि दशै तर गरिवका लागि 'दशा' हुने गरेकाे छ । बेलका नगरपालिका २ पुरन्दहका यि चाैधरी परिवारका लागि पनि दशै दशा भयाे । छिमेकीमा ठूलाे खसी नवमी विहिबार काटियाे । उनकाे घरमा दशै अाएकाे थिएन । ४५ बर्षिय पुरण चाैधरीलाई दशै विदा पनि थिएन । उनी मजदुरी गर्न निस्केका थिए । उनका दुई छाेरा र श्रीमति भने बेलुकाकाे छाक टार्न नजिककाे खेतकाे कुलाेमा माछा मार्न व्यस्थ्य थिए । दुई वटा बल्छी र एउटा जाल लिएर माछा खाेजिरहेका थिए । १२ बर्षिय छाेरा श्रीकान्तले भने- 'दशै यही माछा खाएर मनाईन्छ ।' तस्विर:देबेेेन्द्र कार्की
प्रकाशित मितिः कार्तिक २, २०७५
६७२ पटक पढिएको
रासस/ आज देशभर नेपालीहरुको महान् चाड बडादशैँको महानवमी पर्व मनाइँदै छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन वैदिक विधिपूर्वक माता नवदुर्गा भवानीको आवाहन गरी घटस्थापना गरिएको जलपूर्ण कलशमा आज नवरात्रिको अन्तिम दिन विशेष श्रद्धाभक्तिपूर्वक पूजाअर्चना गरिन्छ । प्रतिपदादेखि महानवमीसम्म नवदुर्गा, कुमारी, महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा तथा सप्तशती पाठ गरी विजयादशमीका दिन विसर्जन गर्ने चलन छ । सो कलशको जल अभिषेक गरी टीका–प्रसाद लगाउनाले वर्षभरि नै सुख, शान्ति र आरोग्य मिल्ने जनविश्वास रहेको छ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिर आज एक दिनमात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिँदै छ ।
प्रकाशित मितिः कार्तिक १, २०७५
५८५ पटक पढिएको
वली प्रथाले दशैको वदनाम
दशै हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको एक महान चाड हो । यो चाडमा दश दिन सम्म विभिन्न देवीदेउताको पुजाआजा गर्नुको साथै टाडा टाडा वाट आएका आफन्त ईष्टमित्र, भाईवन्धु सग भेटघाट गर्ने, रमाईलो महसुस गर्ने सामाजिक एकताको प्रतिकको रुपमा लिईन्छ । समाज उत्थानमा यो चाडको सकारात्मक पक्ष धेरै छन । यसको वास्तविक उद्धेश्य वुभ्mने हो भने यो चाड हिन्दुले मात्र होईन समस्त मानव समाजले मनाउदा फरक पर्दैन थियो । तर हिजोआज यो चाडमा अनावश्यक तडकभडक , फजुल खर्च , पशुपन्छिलाई मारेर दिईने वलि प्रथाले दशै चाड प्रति नै मानिसहरुमा वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ । हिन्दू धर्ममा कतै पनि वर्णन नगरीएको वली प्रथालाई केहि स्वार्थी विद्धा
आज पूर्वका शक्तिपीठहरुमा घुइँचो(तस्विरसहित)
धरान / विजया दशमीको अवसरमा सुनसरीको धरानस्थित दन्तकाली, सप्तरीको छिन्नमस्ता, कंकालिनी सहितका शक्ति पीठहरुमा दैनिक पूजाआजा गर्न श्रद्धालु भक्तजनको व्यापक भींड बढेको छ । दन्तकाली मन्दिरमा विहानैदेखि प्रत्येक दिन नौरथा मेला लागिरहेको छ । आज महाअष्ठिमीको पूजा आराधाना भईरहेको छ । विहानैदेखि पशुबली दिनेहरुको भीड लागेको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरस्थित विजयपुर डाँडामा पर्ने दन्तकालीको चर्चा रुद्राक्षारण्य महात्म्यले गरेको छ । तीन तहको छाना युक्त नेपाली तले शैलीमा निर्मित यो मन्दिरको छाना माथि धातुको आकर्षक गजुर पनि राखिएको छ । दन्
प्रकाशित मितिः आश्विन ३१, २०७५
अाज महाअष्टमी र कालरात्रि पुजा
काठमाडौँ / आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाअष्टमी पर्व आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाआजा गरी मनाइँन्छ । महाअष्टमीका दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्व रहेको छ । आजको दिन शास्त्रसम्मत रूपमा दशैँघर, कोतलगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गाको विशेष पूजाआजा गरिनाका साथै दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्देवीभागवत् र देवी स्तोत्र पाठ गरिन्छ । विवेकशील र अविवेकशील प्राणी दुवैले मोक्षप्राप्तिको चाहना गर्ने हुनाले देव मन्दिर र यज्ञयज्ञादिमा विधिपूर्वक बलि दिनाले ती पशुले मोक्ष प्राप्त गरी माथिल्लो योनिमा जन्म लिने शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्म
आज फूलपाती, धुमधामका साथ भित्र्याइँदै
धरान / आज फुलपाती, बडादशैंको सातौं दिन । सप्तमी तिथिमा पर्ने यस दिन हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको महान चाड बडादशैंको महत्वपूर्ण दिन पनि हो । घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा र फुलपातीलाई आज दशैंघरमा भित्र्याईन्छ । कालरात्री देवीको पूजा अर्चना गरिनुका साथै नेपालीका घरघरमा फुलपाती भित्र्याईन्छ । दसैंघरमा उखुको बोट, केराको बोट, बेलपत्र, दारिम, अशोक, बेल, मानक, कर्चुर, धानको बोट, जयन्ती, धानको बाला, अशोकको पात, अदुवाको बोट र नयाँ फलफुलका पालुवालाई शुभ साईतका रुपमा फुलपाती मानेर भित्र्याईन्छ । काठमाडौको वसन्तपुरमा भने गोरखा दरबारको दसैंघरबाट ल्याइएको फुलपाती परम्परा अनुसार नै भित्र्याईंद
प्रकाशित मितिः आश्विन ३०, २०७५
१,२०५ पटक पढिएको
प्रकाशित मितिः आश्विन २९, २०७५
१,३९३ पटक पढिएको
अायाे दशैंः पूर्वका शक्तिपीठहरूमा श्रद्धालुको घुइँचो
धरान / आज नवरात्रिको छैटौं दिन, शक्ति–स्वरूपा कात्यायनी देवीको पूजा(आराधना गरिएको छ । कात्यायनीलाई साहसको प्रतिक मानिन्छ । दान लगायतका पुण्यकर्म तथा शुभकार्य गर्दा आसुरीवृतिका राक्षसहरुबाट हुने अवरोध रोक्न देवी कात्यायनीको यस लोकमा आगमन भएको ग्रन्थहरुमा उल्लेख छ ।देवकार्य सिद्ध गर्नका लागि माता भवानी कात्यायन ऋषिको आश्रममा पैदा भएको विश्वास गरिन्छ । त्यसपछि उनले कात्यायन ऋषिकी पुत्री हुन स्वीकार गरेकी थिइन् । नवरात्रको छैटौ दिन पूर्वका विभिन्न धार्मिक स्थलमा भक्तजनहरुको चहलपहल बढेको छ  । धरानको दन्त्तकाली, धनकुटाको निसानेमन्दिर, पाथिभरा, सप्तरीको कंकालीनी, छिन्नमस्ता, इलामको नारायणस्थान, माइस
६४८ पटक पढिएको
आजदेखि बडादसैं शुरु
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँ प्रत्येक जातजातिका आ(आफ्नैे परम्परा र चाडबाड छन्। तथापि बडादसैं त्यो चाड हो जुन प्रायस् सबै जातजाति र जनसमुदायले मनाउँछन्। नेपालीहरूको महान् चाड भएकैले यसलाई ‘बडादसैं’ भनिएको हो। यस पर्वको धार्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रियताका हिसाबले उत्तिकै महत्त्व छ। दसैं भन्नासाथ सबैको मनमा एक किसिमको आनन्द सञ्चार हुन्छ। मीठो खाने र राम्रो लाउने अवसरका साथ यो पर्वले घरघरमा, जनजनमा र मनमनमा उत्साह, उमंग एवं रौनक निम्त्याएको हुन्छ। साधक तथा उपासकहरूका लागि यो भगवतीको आराधना गरी अभीष्ट सिद्धि तथा शक्ति आर्जन गर्ने समय हो
प्रकाशित मितिः आश्विन २४, २०७५
६६६ पटक पढिएको